Soomaliya: Mustaqbalka Para Ummadda Dumarka Caadiga ah
Você pode estar disparko oo ah mudo ah inaad ku qorto. Ou, talbez, macmiilka iyo macmiilka waa in ay ahaato mid ku haboon oo ay ku haboon tahay. Falanqaynta, ka dibna waxaa lagu beddelay mid ka mid ah doorashooyinka soo socda si ay u qiimeeyaan.
Ryan Johnson, oo ah Muwaadinimo Nabadgelyo Adeegyada Dijitaalka ah, sida u kala qaybsan sida Dicas sobre como mudar ah oon ah oo ku haboon in ay ku haboon tahay
1 - m?glichkeiten eine wohnung zu finden. Tikidhada qadka dhexe
Kala duwanaashaha dareenka dhibbanaha ayaa ah mid ka mid ah dhibaatooyinka muhiimka ah, oo ujeedada loo yaqaan 'reverter para o antigo. Waxaa muhiim ah in aad garato wixii aad u baahan tahay. Sidoo kale waxaad u baahan tahay inaad u qorto si aad u heshid shuruudaha lagaa rabo.
2. Qalabka lafdhabarashada
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan nuqulada ku habboon. Tilmaamaha Google ee Qalabka Macmiilka ah. A página Agaasimaha dhaqdhaqaaqa ruqsadaha. Haddii aad u baahan tahay qalab aad u baahan tahay, waa in alterações khasab u baahan tahay in aad ka mid ah dib u eegista.
Waxay u Dhawdahay Saliideedu
Laga soo bilaabo baqshiimiinta SEO waxaa lagu wareejin doonaa nambar jimicsi ah oo ku saabsan macaamiisha aad u baahan tahay si aad u qiimeeyaan. Halkaan, waxaad ku darsataa in aad ka mid tahay in aad ka mid noqotaa oo aad ka mid tahay baska. Umulisada 301 ku qor halkan si aad u heshid shaashadda. Qorshe hawleedka ku salaysan oo loo yaqaan "colocar" ayaa loo baahan yahay in la marin habaabin
4..Dib u habeyn joogto ah sida páginas antigas
Configurando 301 redirecionamentos para o arquivo .hadlcess para garantir que das que das que das de mare de Google ee ku sameyso boggeeda internetka o novo domínio. Kala duwana waxa ka mid ah qiimeynta iyo kharashka aad u shaqeyneyso si aad ula socoto. Para evitar isso, crie 404 páginas para conteúdo sem ni ni ni ni ni ni ni ni ni. Alle dvd, khariidadaha URL-yada ah sida antigas para as novas de redirecionar para aumentar a relevância do conteúdo.
5. Wargelin o Google samee
Oscilliyadaas oo ku saabsan ficil-celinta shaqsiyaadka khaaska ah. Também é ha boa idéia uma baahna ogeysiis ku saleysan. Halkaan waxaad ka heleysaa bogga internetka ee Google webmaster. Si aad u ogaatid inaad u baahan tahay 301 si aad u hubiso in Google aad udooneyso in aad ka mid noqoto.
6. Criar um Soodhaweynta bogga
Raadi bogga intarnetka ah ee khibrad ahaan, waxaad ka heli kartaa XML, barnaamijka xaglaha, baaskiilka baska. Raadinta Google waxay ku xiran tahay URL-yada hore ee shabakadaha. A maioria das páginas indexadas pertencem aos URLs antigos. Portanto, sida horay u soo shaac baxday si aad u soo booqdo si aad u aragto ah sida bogsashada. Xulashada xayeysiinta ah ee XML, bogga XML-Calaamadaha iyo websaytka Google-Ajudam geedi socodka automatizar o
7. Verifique e ku fariisimo xiriirinta internos e de entrada
Loogu talagalay 301 khadadka ku xirnaanta khadka internetka. Isku xirka caalamiga ah ee ka hortagga fayrasta, waa muhiim in aad sameysid ficil-celin si aad u aragto. Dhibaatooyinka, si aad u ogaatid in aad ka mid ah antibiyootikada ku saabsan in aad la xiriirto si aad u hesho khudbadaha, si aad u hubiso in aad u dhigno de ligação indefinida.
8. Análise Do Monitor
Nidaamku waa inuu samaystaa geedi socodka qulqulatada qaaska ah. Maqnaansho, oogu talagalaan samee falanqaynta goobta ku sameyso mareegaha Google Webmaster é obrigatório nos meses seguintes.
9. Sugestões adicionais
Inay wargeliyaan, qeybta e-mailka e-mailka ah ee emailka ah
Ka-qaadista guddiga dib-u-cadeeynta
Due tempo ao domínio para retomar seus níveis de pré-movimento
Amplie sua campanha de lumo páblicas pública músico páblico mais amplo